IDOZI ỌKWA SNAPCHAT ANAGHỊ ARỤ ỌRỤ (IOS & GAM AKPORO) - ADỤ
Idozi chatma Ọkwa Snapchat Na-adịghị arụ ọrụ
2015-16 hụrụ ịrị elu nke Snapchat, ụdị ọhụrụ nke akụkọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Snapchat na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta obere vidiyo nke 10 sekọnd na foto (nke a na-akpọ Snaps) nke ndị enyi ha na ndị na-eso ụzọ ha ga-ele anya maka awa 24, biputere nke ọdịnaya ga-apụ n'anya. Snapchat weputara uzo yiri nkata. Ozi (foto, vidiyo, ma ọ bụ ederede) ozugbo enyocha kwụsịrị ruo mgbe ebighị ebi. Ikpo okwu ahụwo uto ihu igwe na ọnụọgụ ya kemgbe ewepụtara mbipute kwụsiri ike ma ugbu a na-adọta ihe karịrị 229 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị (dị ka nke Machị 2020). Ọdịmma nke ọdịnaya akụkọ na-apụ n'anya na-apụ na-amanye nyiwe ndị ọzọ n'ahịa dị ka Instagram, Whatsapp, na ọbụna Twitter ugbu a ịnakwere ya.
E nwere mgbe ụfọdụ iche, ma na igwefoto mma ma ọ bụ atụmatụ, n'etiti iOS version of Snapchat na gam akporo otu. Ọ bụ ezie na, otu okwu nke dịịrị ha abụọ bụ na ọkwa ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ. Okwu a kọrọ site na ọtụtụ ndị ọrụ na ike na-akpata site na ọtụtụ ihe. Maka ndị na-ebido, ọ bụrụ na ngwa ahụ enweghị ikikere kwesịrị ekwesị, ọkwa ahụ agaghị arụ ọrụ. Ihe ndi ozo gh’enye Ghabighara ido onwe gi nsogbu n’iru, bug n’ebe uzo ngwa a di ugbua, cache bufee wdg. na akụkọ ha, iji kpughee ma ọ bụrụ na ozi ị zigara bụ nseta ihuenyo, wdg.
Anyị na-enyocha ịntanetị ma nwaa aka anyị na ụfọdụ ngwọta nwere ike ịsị na 'ificationsma Ọkwa Na-adịghị Ọrụ na Snapchat', a ga-akọwa ha niile n'ụzọ zuru ezu n'isiokwu a.
Wzọ 6 iji dozie ọkwa Snapchat na-adịghị arụ ọrụ
Nweta Snapchat Notifications iji rụọ ọrụ ọzọ
Usoro 1: Lelee ma Snapchat Push Notifications na-arụ ọrụ
Usoro 2: Jide n'aka na Snapchat na-ahapụ ka izipu ificationsma Ọkwa
Method 3: Gbanyụọ nsogbu ọ bụla
Method 5: Kwe ka Snapchat nweta Internetntanetị na ndabere
Method 6: Melite ma ọ bụ Reinstall Snapchat
Nsogbu Snapchat dị na aka adịghị njọ ma ọlị. Ime ihe niile edere n’okpuru ga - ewe gị ihe dịka nkeji 5-10. Anyị ga-ebu ụzọ hụ na Snapchat nwere ikike niile ọ chọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma. Ndepụta a gụnyere ikikere ịkwanye ọkwa na ihuenyo ụlọ ekwentị ma nọrọ n'ọrụ na ndabere. Ọ bụrụ na ikikere abụghị nsogbu, ndị ọrụ nwere ike ịnwa ihichapụ oghere dị nwa oge na data ngwa ndị ọzọ, melite na nsụgharị kachasị ọhụrụ ma ọ bụ wụnye Snapchat ọzọ. Ọ bụrụ na ndị Snapchat startedma Ọkwa na nso nso a malitere misbehave, gbalịa n'okpuru ngwa ngwa ngwọta mbụ.
Banye na Laghachi - Nke a nifty atọ a mara idozi a otutu okwu na ọrụ ntanetị. Signbanye na-amaliteghachi nnọkọ na ọzọ, ị nwere ike ikpochapụ ngwa ahụ site na ngwa ngwa ndị ị na-adịbeghị anya iji dozie usoro ezighi ezi. Iji pụọ: Kpatụ akara ngosi profaịlụ gị na akara ngosi gia iji mepee Ntọala Snapchat. Pịgharịa n'ụzọ niile ala na enweta na pụọ. Kwenye omume gị wee swipe pụọ Snapchat na ngwa ngwa ndị na-adịbeghị anya.
Malitegharịa ekwentị gị na ngwaọrụ - Kedụ ka anyị ga - esi kpọọ edemede a tech ‘How-to’ n’etinyeghi evergreen ‘regharịa ngwaọrụ gị’ aghụghọ? Ya mere, gaa n'ihu ma Malitegharịa ekwentị gị gam akporo / iOS ekwentị otu ugboro ma lelee ma ọ bụrụ na ọkwa Snapchat amalite ịrụ ọrụ ọzọ. Ka ịmalitegharịa, pịa ma jide bọtịnụ ike anụ ahụ ma họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị site na menu ike.
A na-ahapụ ndị ọrụ ịhazi ọkwa Snapchat ka ha wee chọọ, dịka ọmụmaatụ: mee ka ọkwa ọkwa akụkọ maka onye pụrụ iche, aro ndị enyi, kpọtụrụ, gbanyụọ ha kpamkpam, wdg. Site na ngwa ahụ. Ọ ga-ekwe omume na ị gbanwere amamịghe na mberede oge ikpeazụ ị nọrọ ebe ahụ ma ọ bụ mmelite ọhụrụ nwere nkwarụ na-akpaghị aka ha. Ya mere, ka anyị gbadaa na ntọala Snapchat ma hụ na nke ahụ abụghị ikpe.
1. Meghee nke gi Igbe drawer na enweta na Akara Snapchat ẹkedori ngwa. Ọ bụrụ na ịbanyebeghị, tinye aha njirimara / adreesị ozi-e, paswọọdụ gị, wee pịa bọtịnụ nbanye .
2. Kpatụ na gị Foto profaịlụ (Bitmoji ma ọ bụ mmụọ ọcha na-acha odo odo gbara gburugburu) na akuku aka ekpe wee pịa na cogwheel akara ngosi ntọala nke gosipụtara n'akụkụ ọzọ iji nweta ntọala Snapchat.
3. Na Akaụntụ M ngalaba, chọta Ma Ọkwa nhọrọ na enweta na ya (Na gam akporo ngwaọrụ: ngosi Ntọala dị n'okpuru Advanced ngalaba).
4. Na-esonụ na ihuenyo, onye toggle switches (ma ọ bụ igbe) iji chịkwaa ma ngwa pushes hesma Ọkwa nke akụkọ sitere na ndị enyi, ntụnye enyi, ncheta, ncheta ọmụmụ, wdg . ga-ano. Kwado ha niile ịnata ọkwa niile ma ọ bụ naanị ndị akọwapụtara na ọ dị ka ọ naghị arụ ọrụ.
5. Na ala ihuenyo ahụ, pịa Jikwaa Amamọkwa Akụkọ ma ọ bụrụ na-agaghị amara gị ọkwa nke akụkọ ndị mmadụ bipụtara ma ọ bụ ihe ndekọ aha ọ bụla ọzọ.
na-atụba ebe nchekwa anụ ahụ na diski
6. Pịnye aha onye ahụ metụtara na ogwe ọchụchọ wee pịa Emela iji mata gị oge ọ bụla ha biputere ọhụụ.
Afọ ole na ole gara aga ahụwo ndị ọrụ na-eto eto karịa banyere nzuzo ha na nke a amanye ndị nrụpụta ka ha hapụ ha ikike zuru oke na ikikere ikike nke ngwa ọ bụla dị na ekwentị ha. Nweta igwefoto na igwe okwu n'akụkụ, ndị ọrụ nwekwara ike ijikwa ma ọ bụrụ na ahapụ otu ngwa ịkwanye ọkwa. Ohaneze, mgbe ọ bụla onye ọrụ mepere ngwa maka oge mbụ, ozi gbapụta na-arịọ ka ikikere niile achọrọ ga-apụta. Mgbata ‘Mba’ kụrụ na ozi nkwupụta ọkwa nwere ike ịbụ ihe kpatara na ha anaghị arụ ọrụ. Ka o sina dị, ndị ọrụ nwere ike ime ka ọkwa maka ngwa sitere na ntọala ngwaọrụ.
1. Ẹkedori ke Ntọala ngwa na ekwentị mkpanaaka gị.
2. Na ngwaọrụ iOS, chọta ebe Ma Ọkwa nhọrọ na enweta na ya. Dabere na ngwaọrụ gam akporo ( OEM ), kpatụ Ngwa & Notma Ọkwa ma ọ bụ Ngwa na Ntọala menu.
3. Depụta ngwa niile awụnyere na mkpụrụedemede wee gbadaa ruo mgbe ị chọta Snapcha t. Pịa iji lelee nkọwa.
4. iOS ọrụ pụrụ nanị toggle na Ekwe ka Notma Ọkwa ịgbanwee gaa Gbanye ọnọdụ iji kwe ka Snapchat mee ka ọkwa mara. A ole na ole gam akporo ọrụ, n'aka nke ọzọ, ga-mkpa enweta na Ma Ọkwa mbụ na mgbe nwee ha.
Ọ bụrụ na enyere ọkwa ahụ maka Snapchat, gbanwere ihe ndị ahụ na-agbanyụ wee weghachite ntọala ahụ.
Ọzọkwa Gụọ: Esi Kpido Ọnọdụ na Snapchat
Ewezuga profaịlụ izugbe niile na ngwaọrụ anyị, Enwekwara usoro Silent na Do Dist Disturb. Ebumnuche ha abụọ iji gbochie ihe ndọpụ uche mgbe ndị ọrụ kwesịrị itinye uche n'ihe na offline. Ọnọdụ Nsogbula Nsogbu siri ike karịa ọnọdụ Silent ma ghara ikwe ka ụdị ọkwa ọ bụla gbanye na ihuenyo ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ DND nọ n'ọrụ, soro usoro ndị a iji gbanyụọ ya ma nata ọkwa niile ọzọ.
1. Na ngwaọrụ nke ọ bụla, malite Ntọala .
2. Enyena nsogbu ịtọ ntọala na iOS edepụtara na menu nhọrọ n'onwe ya mgbe ọ nọ na gam akporo, ọnọdụ DND nwere ike ịchọta n'okpuru .Da .
3. Nanị Gbanyụọ Ekwekwala ọnọdụ site ebe a.
Ndị ọrụ iOS nwekwara ike gbanyụọ-enyere Do Do Disturb from the control center n'onwe ya na ndị ọrụ gam akporo nwere ike ịgbakwunye ụzọ mkpirisi ụzọ maka otu na akwụkwọ ngosi ha.
Ọ bụla ngwa na anyị mobile ngwaọrụ emepụta nwa oge cache data iji nye a snappier ahụmahụ. Ọ bụ ezie na data nchekwa anaghị enwe ihe ọ bụla jikọrọ ya na ọkwa, oke ibu ha nwere ike n'ezie iweta ọtụtụ nsogbu ngwanrọ. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na ị na mgbe nile ikpochapụ cache data niile ngwa na ekwentị gị
1. 1. Ẹkedori Snapchat ngwa ma nweta ntọala ntọala ya (lee usoro nke 2 nke usoro mbụ).
2. Pịgharịa gaa na ala ntọala menu na enweta na Clear Cache nhọrọ.
3. Na ndị na-esonụ mmapụta, enweta na Gaa n'ihu bọtịnụ ka ihichapụ faịlụ niile dị n'ime oghere.
Ndị ọrụ gam akporo nwekwara ike ihichapụ oghere ngwa ahụ site na ngwa Ntọala.
Ọzọkwa Gụọ: Etu esi eme ntuli aka na Snapchat?
Ihe ọzọ na-ebutekarị ọkwa na anaghị arụ ọrụ bụ nke ahụ A naghị ekwe ka Snapchat gbaa ọsọ ma ọ bụ jiri data mkpanaka na ndabere. Ngwa ndị ga-adị mkpa ka ha nọrọ na nkesa na sava ha wee lelee maka ọkwa ụdị ọ bụla kwesịrị ikwe ka ha nọrọ n'ọrụ na ndabere. Ha nwere ike igbapu batrị ekwentị gị ma gbanyụọ data mkpanaka ma iji nata ọkwa, ọ dị mkpa ịchụ àjà ndị a.
Maka ndị ọrụ iOS:
1. Mepee Ntọala ngwa wee pịa izugbe .
2. Họrọ Ndabere App Ume na-esote na ihuenyo.
3. Na ndị na-esonụ ndepụta nke arụnyere ngwa, hụ na agbanyere mgba ọkụ na-esote Snapchat.
Maka ndị ọrụ gam akporo:
1. Ẹkedori ekwentị Ntọala pịa na Ngwa / Ngwa na Notma Ọkwa .
2. Chọta Snapchat pịa na ya.
3. Na ngwa ngwa, enweta na Ekwentị mkpanaka & WiFi (ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nhọrọ) ma mee ka Ndabere data na Ejighi data ojiji Nhọrọ na ihuenyo na-esote.
win 10 mmalite menu oké egwu njehie
Ihe ngwọta ikpeazụ maka nsogbu 'Snapchat Notifications not working' bụ ịtinye ngwa ahụ kpamkpam. Otu ahụhụ na-enweghị nsogbu nwere ike ịkpata nsogbu ahụ ma nwee olile anya, ndị mmepe ahụ edozila ha n'oge ọhụụ. Imelite Snapchat:
1. Mepee Storelọ ahịa na gam akporo ngwaọrụ na Storelọ Ahịa na iOS.
2. Pịnye Snapchat n'ime ogwe ọchụchọ ịchọ otu ihe ahụ wee pịa nsonaazụ ọchụchọ mbụ.
3. Kpatụ na Mmelite button iji kwalite ọhụrụ version nke ngwa.
4. Ọ bụrụ na imelite enyeghị aka na ọkwa na-aga n'ihu na - agụpụ gị, Wepu Snapchat kpam kpam.
Na iOS - Pịa ma jide na Snapchat akara ngosi ngwa, pịa Wepu bọtịnụ nke gosipụtara na akuku aka nri nke akara ngosi, wee họrọ Hichapụ site na igbe igbe a. Ikwesiri ikwenye ihe ị n’eme site na ịpị aka Hichapụ ọzọ.
Na gam akporo - Enwere otutu uzo di iche iche iwepu ngwa na gam akporo. Easiestzọ kachasị mfe ga-abụ isi ala Ntọala> Ngwa. Kpatụ na Ngwa na ị ga-achọ wepu ma họrọ Iwepụ .
5. Malitegharịa ekwentị gị na ngwaọrụ mgbe iwepu ya.
6. Gaba azụ ka Play Store ma ọ bụ App Store na wụnye Snapchat ọzọ .
Etu esi ahapu akuko nke onwe na Snapchat?
Olee otú Dekọọ na-enweghị na-ejide Button na Snapchat?
Idozi Snapchat Igwefoto Na-adịghị Arụ Ọrụ (Nchọpụta Ihuenyo Black)
Etu aga-esi zipu snap na Snapchat
Anyị nwere olile anya na ntuziaka a nyere aka ma nwee ike idozi Snapchat notma Ọkwa na-adịghị arụ ọrụ nke na iOS na gam akporo. Mee ka anyị mata onye mere ka ị ghọgbuo gị ma ọ bụrụ na anyị enwetaghị azịza ọ bụla ọzọ pụrụ iche na ngalaba ndị dị n'okpuru.
njehie dị oke egwu bido menu windo 10
sistemu faili sistemụ anaghị arụ ọrụ
nweta nkwalite na windo 10 rapaara na 99